मुम्बई भयावह बन्दै – कस्तो छ नेपालीहरुको अवस्था ! « Media for all across the globe
मुम्बई भयावह बन्दै – कस्तो छ नेपालीहरुको अवस्था !
मुम्बई । कोरोना भाइरस कोभिड–१९) ले भारतको भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। महाराष्ट्र राज्यले सबैभन्दा धेरै कोरोनाको उच्च जोखिम थेगिरहेको छ। राज्यमा अहिलेसम्म ४९ हजार ६ सय १६ जना करोना संक्रमितहरुको उपचार भइरहेको बताइन्छ। महाराष्ट्रमा ५३ सरकारी र ४२ निजी गरेर ९५ कोरोना परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिएको छ। तर, संक्रमित लगातार बढिरहेकाले प्रयोगशाला थप्नुपर्ने सुझावहरु आइरहेका छन्।
मुम्बईमा संक्रमितहरुको संख्या बढेकोमा महाराष्ट्र उच्च अदालतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राज्य सरकारलाई स्वास्थ्य सेवा स्तरिय र आधुनिक निमार्ण सहितको बनाउँन आग्रह गरेको छ। कोरोना उपचाररत अस्पतालहरु व्यबस्थित नभएको गुनासो आएपछि, उच्च अदालतले नागरिकलाई प्रयाप्त सुविधा नदिनुको कारण समेत मागेको छ।
भारतमा शुक्रबारसम्म २ लाख ९७ हजार ५ सय ३५ जनामा संक्रमण देखिएको छ। भारतमा कोरोनाबाट ८ हजार ४ सय ९८ जनाको मृत्यु भएको छ। यो संख्या क्रंम दिनानुदिन बढिरहेकोप्रति विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि चिन्ता जनाएको छ। मुम्बईमा बन्दाबन्दी कायमै भएतापनि सडकमा मानिस र सवारी साधनहरुको चाप देखिन थालेको छ। एकतर्फ मुम्बईलाई कारोनाले घेरिरहेको छ भने अर्को तर्फ मानिसहरु बाहिर निस्किने क्रंम रोकिएको छैन।
मुम्बईमा रोगजारी गर्ने नेपालीहरुको संख्या करिब २ लाख बढि छ। ती मध्ये कतिपय नेपाल पुगिसके भने कति मुम्बईमा नै बसिरहेका छन्। यहाँ बसिरहेका र कामविहीन बनेका नेपालीलाई बिभिन्न नेपाली संघ–संस्थाहरुले राहत सामाग्री सहयोग गरिरहेको अधिकारकर्मी तथा लेखक प्रवीणसिंह विकले जनाएका छन्। मुम्बईका नेपालीहरु भने दिल्ली दूवातासको चुपचाप हर्कतले दिक्क भएको बताएका छन्। “जागिरे राजदूत र टिकटके कर्माचारीहरुको के आलोचना गर्नु – दिल्ली दूतावास आलोचना गर्न योग्य नै रहेनछ” – उनले भने। मुम्बईमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुलाई सचेत र सुरक्षित बनाउँन नेपाली संघ–संस्थाहरको उल्लेखनीय भुमिका देखिन्छ।